တားနည်းရပ်ပြီး ကလေးရဖို့ ဘယ်လောက်စောင့်ရမလဲ? | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် တားနည်းရပ်ပြီး ကလေးရဖို့ ဘယ်လောက်စောင့်ရမလဲ?
ကျွန်တော်တို့ သိလိုရာမေးမှာ မကြာခဏ လူတွေ လာမေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ သားဆက်ခြားနည်းသုံးတာ ရပ်ပြီး ကလေး ချက်ချင်းပြန်ရနိုင်လား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။
ဒီမေးခွန်းနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ ပြောရမယ်ဆိုရင် အတူနေချစ်သူရည်းစားတွေနဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေမှာ အမျိုးသမီးတွေက အချိန်မတန်ခင်မှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ရမသွားစေဖို့ သောက်ဆေး၊ ထိုးဆေးတွေ အစရှိသဖြင့် သုံးတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို သားဆက်ခြားနည်းလမ်းတွေကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သုံးစွဲပြီးတဲ့အခါ ရပ်လိုက်တာနဲ့ ကလေးတန်းရနိုင် မရနိုင်ဆိုတာက ကိုယ်သုံးတဲ့ သားဆက်ခြားနည်းလမ်းအပေါ် မူတည်ပါတယ်။
စေျးကွက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ သားဆက်ခြားသောက်ဆေးတွေ အများစုမှာ လေဒီယာရဲ့ ဖိုင်းလို ဟော်မုန်းတစ်မျိုးတည်းပါ နဲ့ လေဒီယာရဲ့ လက်တာလို ဟော်မုန်း နှစ်မျိုးပါ သားဆက်ခြားသောက်ဆေး ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဓိကက နေ့စဉ်သားဆက်ခြားသောက်ဆေးကို သုံးတဲ့ လေဒီဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဟော်မုန်းတစ်မျိုးထဲ ပါတဲ့ဆေးပဲ သောက်သောက်၊ ဟော်မုန်း နှစ်မျိုးပါတာပဲ သောက်သောက်၊ ရပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ မကြာခင်အချိန်ကာလ (ခန့်မှန်း ၂ ပတ်ကနေ ၁လအတွင်း) မှာပဲ သားဉစကြွေပါလိမ့်မယ်။ သားဉကြွေတဲ့အချိန်က အမျိုးသမီး တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးကတော့ မတူညီနိုင်ပေမယ့် သားဉစကြွေပြီဆိုတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
ဒီတော့ နေ့စဉ်သားဆက်ခြားသောက်ဆေးနည်းလမ်းကို အသုံးပြုသူပျိုမေတွေအနေနဲ့ ဆေးရပ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ဖို့ ယေဘူယျအားဖြင့် အချိန် ၁လကနေ ၃ လထိသာ ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
အရပ်ထဲမှာ ၃လခံ ထိုးဆေးလို့ အကြမ်းဖျင်းသိပြီး Depo Provera Shot လို့ခေါ်ကြတဲ့ လေဒီယာရဲ့ Andalan လို သားဆက်ခြားထိုးဆေးကတော့ ပရိုဂျက်စတင် ဟော်မုန်းတစ်မျိုးတည်းပါတဲ့ ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ၁၃ ပတ်ပြည့်တာနဲ့ ရက်ချိန်းနဲ့ ပြန်ထိုးရတဲ့ ဒီဆေးရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ထိုးဆေး အသုံးပြုတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ရာသီလုံးဝမလာတော့တာပါပဲ။
တစ်ခုရှိတာက ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုတဲ့ အမျိုးသမီးဆိုရင်တော့ ထိုးဆေးဆက်မထိုးတော့ပေမယ့်လဲ သောက်ဆေးလောက် ကိုယ်ဝန်ရနှုန်း မြန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အသားထဲကို တိုက်ရိုက် ထိုးသွင်းရတဲ့ ဆေးဖြစ်တာကြောင့် ဒီဆေးမှာ ပါဝင်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေက အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိ ကိုယ်ခန္ဓာကြွက်သားတွေထဲမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီနည်းလမ်းအသုံးပြုသူ အမျိုးသမီးအများစုအတွက် ထိုးဆေးရပ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရနိုင်နှုန်းက ဆေးသုံးစွဲခဲ့တဲ့ ကာလအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဉပမာ ကိုယ်က ၃ လခံထိုးဆေး ၁ကြိမ်ပဲ ထိုးဖူးပြီး ရက်ချိန်းတစ်ခါမှ ပြန်မထိုးဘဲ ကလေးတန်းယူမယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး ၃ လကနေ ၆လ လောက်ပဲ စောင့်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ဒီနည်းလမ်းကို နှစ်နဲ့ချီပြီး သုံးဖူးမယ်… နှစ်နဲ့ချီပြီ ဆိုမှတော့ ရက်ချိန်းတွေ ခဏ ခဏထိုးထားတဲ့အတွက် ကိုယ်တွင်းကြွက်သားတွေမှာ ဟိုမုန်းပမာဏ ပိုများနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အဲ့လို ဒီနည်းလမ်းကို ကြာရှည်သုံးထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ကိုယ်ဝန်ပြန်ရဖို့ ၁ နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိ စောင့်ရတတ်ပါတယ်။
လေဒီယာရဲ့ Implenex လို လက်မောင်းတွင်းထည့် သားဆက်ခြားပစ္စည်းကတော့ ဟော်မုန်းပါတဲ့ နည်းလမ်းပါပဲ။ သက်တမ်း ၃ နှစ်အတွင်း သူ့မှာပါတဲ့ ဟော်မုန်းက ကိုယ်ဝန်မရနိုင်အောင် တားဆီးပေးပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းကို သုံးစွဲသူ အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တော့ လက်မောင်းထဲက ထုတ်ပြီးပြီးချင်း အချိန်တိုအတွင်းမှာ သားဉကြွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ဝန်ရဖို့ဆိုရင် အနည်းဆုံး ၁လလောက်ပဲ စောင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေဒီယာရဲ့ Copper Y Copper T Sleek တို့လို IUD တွေကတော့ ဟော်မုန်းမပါတဲ့ သားအိမ်တွင်းထည့် သားဆက်ခြားပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းတဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် သက်တမ်း ၅ နှစ်ကနေ ၁၀ နှစ်အထိ ကိုယ်ဝန်တားပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းသုံးထားသူ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ သားအိမ်ထဲက ပစ္စည်းကို ထုတ်ပြီးမကြာခင် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲ ကိုယ်ဝန်တန်းဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဟော်မုန်းမပါတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် IUD ထုတ်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ သားအိမ်က သားဉကြွေတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ဖို့ သက်တမ်း ၁ လလောက်ပဲ စောင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။